Umhlaza womntu kubudlelwane: Qonda kwaye Mgcine Ethandweni - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Umhlaza womntu kubudlelwane: Qonda kwaye Mgcine Ethandweni
Umhlaza womntu kubudlelwane: Qonda kwaye Mgcine Ethandweni
Indoda yoMhlaza ngumntu onemvakalelo kwaye onobuntununtunu kubo apho ukuphoxeka kuthando kuthetha lukhulu. Ngakumbi, unoxanduva lokuhlala apho kwaye athathe umonakalo njengoko usiza, engakhange athethe nto.
Unomdla kwaye ujonge. Uthatha ezinye izinto ngokwakhe.
Uzinikele kakhulu kubudlelwane nakwintsapho. Ungumntu oxhalabisayo.
Uthatha yonke into malunga neqabane lakhe ngokungathí sina. Unenkani kwaye akaqeqeshekanga xa kufikwa kubudlelwane bexesha elide.
Isidingo sakhe sokunxibelelana nabantu kwinqanaba elinzulu, ngaphaya kwenqanaba elingaphezulu, kumshiya esengozini yokuhlaselwa, ukwenzakala. Uhlala ezolile kwaye enomonde kuyo nayiphi na imeko, nokuba kwenzeka ntoni.
Iqabane elifanelekileyo ngumntu onokuwuqonda umhlaza ngala maxesha, umntu ongambeki tyala ngokungakwazi kwakhe ukuveza izimvo zakhe ngokupheleleyo. Uneemvakalelo, unovakalelo kwaye uyakhathala kakhulu malunga nokuba abanye abantu bacinga ntoni ngaye.
Kuphephe ukumgxeka kakhulu
Ayilulo uhlobo lokubamba ingqumbo kwiqabane lakhe kuba lenza imali engaphezulu kunale ayenzayo okanye kuba ezokwenza imisebenzi yasendlini, into ngokwesiko enikwa abantu basetyhini.
Ungumntu ongaphandle kwebhokisi kwaye yindlela ahlala eyiyo. Ezi stereotypes kunye neembono ezindala zithathwa ngokuba ziyintoni, azihambelani noluntu lwanamhlanje.
Enye into ekufuneka uyazi malunga neqabane lakho elinoMhlaza kukuba uyakhathazeka ngetoni, ngayo nantoni na ephantsi kwelanga ekuphekeni amaqanda kusasa ukuya kwisatifikethi esingqubeka endlwini.
Unokubakho kuphela ukubonisa ukuqonda kunye nenkxaso, ukunciphisa uxinzelelo loxinzelelo kunye nokumnceda ukuba aphumelele.
Ayifane ibe yeyokuqala ukwenza ibhinqa, nokuba kungenxa yokuba eneentloni kwaye uneentloni okanye ngenxa yokuba engazi ukuba makenze ntoni kanye kanye.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngumatshi woku-1
Sukulindela ukuba athandane kakhulu kubudlelwane, kwaye endaweni yoko wenze into ekufuneka yenziwe, thatha inyathelo lokuqala kwaye umbonise ukuba kulungile ukubonisa iimvakalelo zakhe.
Musa ukumgxeka kakhulu okanye uya kuphinda ahlasele kwaye aqale ixesha lokuthula nawe njengethagethi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, yamkela nje izimbo zakhe zothando nothando, nokuba unokubambelela kancinci kwaye ubukhali.
Umhlaza uya kuthatha ulawulo olupheleleyo lobudlelwane kwaye uya kufuna ukuba ube ngowakhe ngonaphakade. Akukho buts kunye neengxoxo apha. Xa uthatha isigqibo sokuba kubudlelwane naye, akukho mntu unokuze akulwe ezandleni zakhe.
Indoda ye-gemini kunye nebhinqa le-capricorn
Ufana nomntwana odlalayo ovele wafaka izandla zakhe kwinto yokudlala emnandi entsha. Mxelele nje ukuba ufuna ukuba lapho kangakanani, ecaleni kwakhe, kwaye uyakuba nendoda ezinikeleyo nenothando ethatha icala lakho ngokuchasene nehlabathi liphela.
Isizathu sokuba uMhlaza ukulungele ukuba liqabane ekudala limile, umyeni ozinikeleyo, notata onothando seso sobunzulu bemvakalelo yakhe.
Endaweni yokuba sengqiqweni kwaye abe sengqiqweni, ubuthathaka ngakumbi, kwi-synch ngeemvakalelo zakhe kunye novelwano. Ukhathalele ngokunzulu ukhuseleko kunye nentlalontle yabathandekayo, usapho okanye iqabane lakhe.
Uya kulwa ngokulahla ngokungakhathali nxamnye nazo naziphi na iintshaba, nokuba yeyiphi na imiceli mngeni kunye neengozi ezivela endleleni. Uyazi kakuhle indlela yokuhoya umfazi wakhe, ukuvumela ukuba baphile ubomi obungenaxhala kunye nolwaneliseko.
Le ndoda yindoda yosapho ngalo lonke ixesha, umntu okhangela iqabane aza kwabelana ngalo ngobomi bakhe, ukwakha ubudlelwane obudala kunye nokondla ubudlelwane obunzulu bokomoya obuza kuhlala buhleli kuyo yonke iminyaka.
Uthando kunye nemfesane yakhe iya kwinqanaba uninzi lwethu olungenakho ukuyifumana. Awusoze unqwenele enye into ngaphandle kokuba ube kokwakhe okushushu xa usiva imizamo yakhe eshushu yokukusondeza kunye neminqweno ethembekileyo yokuseka usapho.
Konke le ndoda yeCancer ifuna ukuyifezekisa kubomi bayo bonke kukudlula kwimfuza yayo, ukuseka usapho kwaye uyikhathalele, ukuziqumbela kuloo ngqondo yokuba yeyakho ephakamisa ibar yoluntu kwinqanaba elitsha.
Amaqhina osapho abaluleke kakhulu kuye, abaluleke ngakumbi kunempilo yakhe kunye nempumelelo yobungcali eneneni. Eyona nto ihlala itsaleleka kubafazi abathanda inkululeko nabanamabhongo abangenalo ixesha lokunyamekela indoda eneemvakalelo. Kwiphulo lokusebenzisana okwanelisayo, unokuhamba phakathi kolwalamano olunciphileyo.
Iqabane lasekhaya nelinenkathalo
Inye kuphela into ekufuneka uyazi ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuyifumana nendoda enomhlaza kukuba oku kuya kuba kukuzibophelela kube kanye ebomini, okanye ubuncinci yile nto ayifunayo kuwe.
Uya kuyishiya le ngcamango yokwenza into yakho, kwaye wamkele umbono wokwenza yonke into kunye, wamkele uthando olungenamiqathango kunye nothando, inkxaso yeemvakalelo, ukwangana okuzenzekelayo, kunye nemizamo yesiqingatha-semfene sokuchaza iimvakalelo zakhe.
Xa imeko iba mandundu, kuya kufuneka wazi ukuba uya kuzama ngandlela zonke ukusombulula iingxaki, anikezele konke, nkqu nangokweengcinga zakho ezingcono ngamanye amaxesha.
Isishwankathelo sobudlelwane nendoda enomhlaza sihamba ngale ndlela: uyakuthanda ukuhlala ekhaya, anakekele umzi, ajonge abantwana kwaye enze umsebenzi ngokubanzi endlini.
Uyindoda yosapho eya kuhlala ikhetha ukuchitha ixesha elinomgangatho kunye nabantu obathandayo. Unentliziyo efudumeleyo nothando njengoko enjalo, le ndoda ikwafuna ukuqinisekiswa okuthile kuwe ngokunjalo, ukuphindisela iimvakalelo kunye neemvakalelo zakhe.
Yamkela nje isimo sakhe sengqondo sokulunga kunye nokuncamathela, ukudubula ekuwangeni kwakhe kwaye unxibelelane ngokomoya nobuntu bakhe obunzulu.
Lo mfo uya kuncancisa ubomi kuwe ngokwangana kwenyoka yakhe. Yazi indlela yokuxabisa kwaye umnyamekele naye, kwaye uya kuba nomyeni ogqibeleleyo.
Akukho ngokusisiseko akukho mahluko phakathi kokuhlala naye nokuba nomama wakho apho ukuze anyamekele zonke iimfuno zakho. Ubuncinci ekuqaleni, leyo yingcinga oya kuyifumana, akukho mbuzo ngayo.
ukuhambelana kwamadoda kunye neescorpio kwabasetyhini
Ukuba uluhlobo lokucaphuka okanye ukucaphukiswa yingqwalaselo enkulu kunye nokhathalelo, emva koko ungafumani ithemba lakhe, ubuncinci. Nangona kunjalo, ukuba ungokwemvelo kwaye unovakalelo, ufuna uvakalelo lokuba ngowakho kunye nothando olungenamiqathango, ke kuko konke okhe wakufuna.
Indawo ahlala kuyo ekhaya, umoya woxolo, kunye nosapho olonwabileyo lwenza indlela yakhe yokuphila, amandla akhe, emgcwalisa ngamandla kunye nokuzaliseka, kwaye ayikho enye into ebalulekileyo kuye, emhlabeni.
Ukuhambelana komhlaza eluthandweni
Iimpawu zobudlelwane bomhlaza kunye neengcebiso zothando
ICancer Soulmates: Ngubani Olilungu loBomi babo?
loluphi uphawu lwe-zodiac ngoJulayi 24
IVirgo ngo-Okthobha i-Horoscope yenyanga
leo umfazi virgo man ukuhambelana
Ukuhambelana kwebhokhwe kunye neqhude
virgo umntu ubuthathaka eluthandweni
EyoMsintsi 1 ukuhambelana kophawu lwe-zodiac
saturn kwindlu ye-9